नेपाल लिटरेचर फेस्टिभल : ४ दिन ३२ सेसन - फिचर - कान्तिपुर समाचार
नेपाल लिटरेचर फेस्टिभल : ४ दिन ३२ सेसन
यस्तो हुनेछ साहित्य, सिनेमा र राजनीतिमाथिका बहस
माघ १३, २०७२-शुक्रबारदेखि पोखराको पार्दीस्थित नेपाल पर्यटन बोर्डमा सुरु हुने ४ दिने नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलमा जम्मा ३२ सेसनहरु हुने भएका छन् । साहित्य, सिनेमा र राजनीति लगायतका विषयमा सयभन्दा बढी वक्ताहरुले बोल्नेछन् ।
यसअघि काठमाडौंमा हुँदै आएको यो फेस्टिभलमा यसपटक भने एनसेल संलग्न छैन । यो पाँचौं संस्करणको आयपोजना बुकवर्म फाउन्डेसन र र्‍यान्डम रिडर्स सोसाइटीले संयुक्त रुपमा गरेका छन् ।
फेस्टिभलको उद्घाटन जेपी क्रसले गर्नेछन् भने ‘कि नोट स्पिच’ डा. पिताम्बर शर्माले दिनेछन् । यसपटक विदेशी लेखकका रुपमा भारतीय पत्रकार बर्षा दत्त र लेखिका इरा त्रिवेदी हुनेछन् । प्रद्धिस भारतीय लेखकहरु जावेद अख्तर र उदय प्रकाश आउने भनिए पनि अन्तिम समयमा उनीहरु नआउने भएका हुन् ।
महोत्सवको पहिलो दिन नै केही राजनीतिक विषयमा छलफल हुनेछन् । ‘कस्तो नयाँ शक्ति’ शीर्षकमा डा.बाबुराम भट्टराईले कान्तिपुरका प्रधानसम्पादक सुधीर शर्मा र एमाले सचिव योगेश भट्टराईसँग बहस गर्नेछन् । यसै दिन सांसद् तथा एमाले नेता रवीन्द्र अधिकारीको नयाँ किताब ‘समृद्ध नेपाल’ विमोचन कार्यक्रममा झलक सुवेदी, स्वर्णीम वाग्ले र सूर्यराज आचार्यले यसै विषयमा बहस गर्नेछन् ।
पहिलो दिन नै भाषाबारे शरच्चन्द्र वस्ती र खगेन्द्र संग्रौलाले छलफल गर्नेछन् भने कविताबारे श्रवण मुकारुङ, मनु मञ्जील, सरिता तिवारीले बहस गर्नेछन् । यस्तै, दोस्रो पुस्तक लेखनको सकसबारे नारायण वाग्ले र बुद्धिसागरको सेसन हुनेछ ।
दोस्रो दिन कथामाथि उपेन्द्र सुब्बा, श्याम साह र सीमा आभास, ‘कसरी बनाउने नेपाल ?’ मा रवीन्द्र अधिकारी र रवीन्द्र मिश्र, कालजयी कृतिबारे नयनराज पाण्डे, शारदा शर्मा र मनु मञ्जिल, संविधान र पहिचानबारे पिताम्बर शर्मा, विपिन अधिकारी र सुरेन्द्र लाभ, टेलिभिजनदेखि पुस्तकसम्ममा विजय कुमार र अनुप बराल, जातको कथामा आहुति र सञ्जीव पोखरेल तथा संगीतबारे कर्ण दास र विवेक श्रेष्ठका सेसन हुनेछन् ।
तेस्रो दिन आहुति, प्रशान्त झाले युग पाठकसँग बहिष्करणका कुरा गर्नेछन् भने बर्षा दत्तसँग कुन्द दीक्षितले संवाद गर्नेछन् । यस्तै, सामाजिक यथार्थवादको ह्यांगओभरमाथि कुमार नगरकोटी, शारदा शर्मा र अमर न्यौपाने बोल्नेछन् । नेतृत्व संकटबारे सुधीर शर्मासँग लिलामणि पौडेल र गगन थापाले बहस गर्नेछन् । यसै दिन मिडियामा मधेस माथि युवराज घिमिरे, किरण नेपाल र चन्द्रकिशोरले छलफल गर्नेछन् । तेस्रो दिनको अन्तिम सत्र गजलको हुनेछ ।
चौथो तथा अन्तिम दिनको सुरुवात राजेश हमाल र दयाहाङ राईले ‘हिरो हुनुको अर्थ’बारे बोलेर गर्नेछन् । अंग्रेजी र नेपाली भाषामा लेख्दाको फरकबारे प्रणय राणा, प्रवीण अधिकारी र रवि थापा, के लेख्ने किन लेख्ने ? बारे युग पाठक र संस्रमणमा राष्ट्रवाद विषयमा खगेन्द्र संग्रौलाले बोल्नेछन् ।
प्यारो पात्रबारे नयनराज पाण्डे, बुद्धिसागर र सुविन भट्टराईले नारायण वाग्लेलाई बताउनेछन् भने सिनेमाका सुख दुखबारे गौरी मल्ल, रेखा थापा र ऋचा शर्माले किशोर नेपालसँग संवाद गर्नेछन् । अन्तिम दिन प्रदीप गिरीले महाभारतका पात्रहरुमाथि प्रवचन दिनेछन् । दिनको अन्तिम सत्र कविता वाचनको हुनेछ ।
विस्तृतमा हेर्नुस् कार्यक्रम तालिकाः